Global Voices teny Malagasy » Miady Hanorina Fiainana Vaovao Ireo Mpitsoa-ponenana Nody Any Myanmar · Global Voices teny Malagasy » Print
Miady Hanorina Fiainana Vaovao Ireo Mpitsoa-ponenana Nody Any Myanmar
Voadika ny 19 Desambra 2016 6:09 GMT 1	 · Mpanoratra The Irrawaddy Nandika Nancy
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Ady & Fifandirana, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Politika, Tanora, Vonjy Voina
Trano fanatobiana entan'ny biraon'ny departemantan'ny Fanampiana sy ny Fampodiana ao Rangoon, any amin'ny distrikan'i Mayangone, izay nametrahana vonjimaika ireo mpitsoa-ponenana 17 nody. Sary sy fanazavana avy amin'i Hein Htet/The Irrawaddy.
Ny tranokalam-baovao tsy miankina The Irrawaddy, any Myanmar no nangalàna ity lahatsoratra nosoratan'i Tin Htet Paing ity, ary navoakan'ny Global Voices indray ao anatin'ny fifanekena fifampizaràna votoaty.
Mintantara ny fiainan'ny sasany amin'ireo mpitsoa-ponenana niverina ary miady ho amin'ny fanorenana indray ny fiainany any Myanmar ilay lahatsoratra. Jadona miaramila no nanjaka tao amin'ny firenena ny 1962 ka hatramin'ny 2010, saingy tamin'ity taona ity vao tsy ny tafika intsony no manara-maso ny governemanta fa resy tamin'ny fifidianana ny antokony. Nandritra ny nanjakan'ny jadona, dia nihamafy  ny ady an-trano nanerana ny firenena izay nifanandrinan'ny tafi-panjakana sy ireo vondrom-poko mitàm-piadiana, ka nahatonga ireo mponina hifindra monina sy nanery ireo an'arivony hitady fialokalofana  tany amin'ireo firenena akaiky.
Ny hany anton'ny niverenan'i U Aye Lwin, 46 taona, mpitsoa-ponenana taloha, hody any Myanmar dia ny ahazoan'ireo zanany enina fanabeazana ara-dalàna any an-tanindrazany — Firenena izay nilaozany valo taona lasa izay noho ny korontana ara-politika.
Hatramin'ny taona 2008 no nialokalofany tany amin'ny toby iray ao amin'ny sisintanin'i Thailandy sy Myanmar, fa rehefa nandray ny asany ny governemanta tarihin'ny Ligy Nasionaly ho an'ny Demokrasia dia nanapa-kevitra ny hiverina an-tanindrazana izy.
i U Aye Lwin dia iray amin'ireo mpitsoa-ponenana 17 taloha vao tonga vao haingana ao Yangon (tanàna lehibe indrindra ao amin'ny firenena) avy tany amin'ny toby Nu Po, toby izay nananganan'ny governemantan'i Thailandy sy Myanmar ny sampana miandraikitra ny mpitsoa-ponenana ao amin'ny firenena Mikambana (UNHCR), ary ny Fikambanana Iraisam-pirenena misahana ny Fifindrà-monina (IOM) fifanarahana.
Avy tany amin'ny tetezan'ny Fisakaizàna Myawaddy-Mae Sot ny andiany voalohany nisy olona 65 niverina any Myanmar tamin'ny faran'ny vola oktobra 2016. Nangataka ny halefa any an-tanànany any Yangon ny fito ambin'ny folo tamin'izy ireo.
Nanomana ny sainy hikarama amin'ny fanaovana izay karazana asa rehetra misy i U Aye Lwin mba ahafahan'ny zanany—manomboka amin'ny zanany lahy 4 taona ka hatramin'ny zanany vavy 18 taona— mankany an-tsekoly.
Fa tsy araka ny niheverany azy ny fiverenany.
Hatramin'ny nahatongavany tany Yangon tamin'ny volana Oktobra, dia fialofana vonjimaika tao amin'ny trano fitobianà entana tantànan'ny Biraon'ny Departemantan'ny Fanampiana sy Fampodiana ao Yangon, any amin'ny kaominin'i Mayangone, no nomena ireo mpitsoa-ponenana 17 nody — fianakaviana efatra– miandry ny fandaminan'ny governemantam-paritra hanome trano fonenana maharitra.
3.000 Kyats (2,33 dolara amerikana) isaky ny mpifindra monina mody no omen'io departemanta io , izay miasa eo ambanin'ny Ministeran'ny Fiahiana ara-tSosialy, Fanampiana ary Fampodiana mba ampiasainy amin'ny fiainany andavan'andro. Ankoatr'izay, ny fianakaviana tsirairay dia mahazo 300.000 kyats (230 dolara amerikana) avy amin'ny Firaisan'ny governemanta , ary mialoha ny hialàny tany Thailand dia nanome 8.300 baht (230 dolara amerikana) isaky ny olon-dehibe sy 6.500 baht (180 dolara amerikana) isaky ny ankizy ny governemanta Thai..
Daw Khin San Yee, 59 taona, dia gadra politika taloha sady mpitsoa-ponenana niaraka tamin'ny vadiny tany amin'ny tobin'i Nu Po tamin'ny 2009. Na dia mpitsoa-ponenana aza izy, dia nanaraka ny vaovao momba ny tetezamita demokratika any Myanmar tamin'ny onja-peo sy ny fahitalavitra—hany ahazoana loharanom-baovao tao amin'ny toby..
Vonona ny hiverina any Myanmar aho hatramin'ny nisian'ny governemanta tetezamita [tamin'ny taona lasa]. Toga tao amin'ny toby ny UNHCR sy ny manampahefana avy any Myanmar ary nilaza taminay fa afaka mangataka hody — amim-pahamendrehana— amin'ny fomba ôfisialy izahay.
Daw Khin San Yee, 59 taona, gadra politika taloha sady mpitsoa-ponenana niaraka tamin'ny vadiny, tao amin'ny toby Nu Po tamin'ny 2009. Sary sy fanazavàna avy amin'i Hein Htet/The Irrawaddy.
Ireo fianakaviana efatra niresaka tamin'ny The Irrawaddy tamin'ny herinandro lasa dia niteny fa ny fahatongavan'ny NLD eo amin'ny fitondrana no nanosika azy ireo hody.
Nanome trano mora 9,8 tapitrisa kyat (7.400 dolara amerikana) ho an'ireo mpitsoa-ponenana taloha, any amin'ny faritra misy orinasa Linn Ban any amin'ny kaominin'i Hlaing Tharyar, ny governemantam-paritr'i Yangon, ary niangavy azy ireo mba hanefa izany tsikelikely, aloa mialoha ny 30% ary efaina ao anatin'ny valo taona ny ambiny.
Na izany aza, nandà tsy hividy ireo trano ireo ireto fianakaviana, nolazainy fa tsy afaka hividy izany ry zareo. Tafakatra avo telo heny amin'ny sandany ara-barotra ny hofan'ny trano tao anatin'ny 10 taona latsaka. Nanontaniana ry zareo raha nanana toerana tany Yangon talohan'ny nandaozany an'i Myanmar, nambaran'i Daw Khin San Yee sy U Aye Lwin tamin'ny Irrawaddy fa tsy afaka nividy trano mihitsy ry zareo taloha fa tsy maintsy nanofa toerana. Nanazava i Daw Khin San Yee :
Niverina avy tany amin'ny toby izahay. Niverina tsy nitondra vola be. Ahoana no andoavanay 3 tapitrisa Kyat [ 2.200 dolara Amerikana] ?
Nody mba hitsabo ny vadiny izay malemy tsy afaka mandeha noho ny fihenan'ny nofon-dranjony amin'ny fitsaboana nentim-paharazana i U Thant Zin Maung, 47 taona. Nolazainy fa tsy hifidy asa izy mba ahafahany mampiditra hopitaly ny vadiny sy handefasana ny zanany anankiroa any an-tsekoly raha vao mahazo trano ho fonenana maharitry ny fianakaviany.
Nolazain'i U Win Shwe, talen'ny departemantan'ny fanampiana sy ny fampodiana any Yangon, tao amin'ny The Irrawaddy fa efa nalefan'ny departemantany any amin'ny governemantam-paritra ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary eo am-piandrasana ny handre izay mety ho vahaolana ry zareo, angamba amin'ity herinandro ity (herinadro volaohany tamin'ny volana Desambra). Mbola misedra olana amin'ny fanomezana trano sahaza ireo tsy ara-dalàna mpibodo toerana ao an-tanàndehibe ny governemanta, hoy izy.
Tsy afaka manome trano [maimaimpoana] ho an'ireo izay miverina izahay. Tsy azo atao izany satria misy ihany koa ireo olona izay manana olana goavana. Tsy mpanankarena i Myanmar ka afaka hanome trano maimaimpoana. Mbola misy mpitsoa-ponenana an'hetsiny manantena ny hody any amin'ireo toby any amin'ny sisintany. Raha toa ka manome trano maimaimpoana ho an'ireo mpitsoa-ponenana mody ny governemantan'i Yangon, dia mitady ho any Yangon ihany koa ireo ho avy manaraka, ka tsy ho voafehy ny zava-misy. Tafaverina any Burma [iantsoana an'i Myanmar ihany koa ] ry zareo ary tsy mpitsoa-ponenana intsony. Tsy tokony homena tombontsoa amin'ny anaran'ny maha “mpitsoa-ponenana” ry zareo.
Nambaran'ny manampahefana ihany koa fa iantohan'ny governemantam-paritra tsirairay ny fanampiana sy zo sahaza ny olom-pirenena rehetra ho an'ireo mpitsoa-ponenana nody.
Mg Aung San Suu Kyaw, 14 taona, Mg Kaung Myat Kyaw, 10 taona, ary Mg Zin Ko Win, 4 taona, mipetraka ao amin'ny trano fanatobiana entan'ny biraon'ny Departemantan'ny Fanampiana sy ny Fampodiana ao Yangon, any amin'ny kaominin'i Mayangone. Sary sy fanazavàna omen'i Hein Htet/The Irrawaddy.
U Soe Aung, sekretera maharitra sady mpitondra tenin'ny Ministeran'ny fiahiana ara-tsosialy, ny Fanampiana ary ny Fampodiana, dia niteny tamin'ny The Irrawaddy fa manao araka izay azony atao ny governemanta mba hanampiana ireo mpitsoa-ponenana mody sy hitady izay asa mety ho an-dry zareo.
Notsidihin'i U Naing Ngan Linn, ministra rezionalin'ny fiahiana ara-tsosialy any Yangon, ilay fialofana vonjimaika taorian'ny nahatongavan'ireo mpitsoa-ponenana nody, ary avy eo izy niresaka tamin'ny mpanao gazety fa “andraikitry” ny governemanta ny fikarakaràna trano fonenana maharitra ho an'ireo vao tonga.
Nambaran'i Daw Khin San Yee fa tsy ny hipetraka maimaimpoana ao amin'ny Shwe Linn Ban no tadiavin'ireo mpitsoa-ponenana nody fa toerana izay ahafahan'izy ireo manomboka indray ny fiainany. Ren'ireo mpitsoa-ponenana tafody hafa ilay teny, ary nilaza ry zareo fa tsy te-hiantehitra fotsiny amin'ny fanomezana fa vonona hiasa.
Nolazain'i U Thant Zin Maung fa ‘zao vao tsapan-dry zareo fa tena samy hafa amin'ny zavatra andrasan-dry zareo ny zava-misy.
Ma Thiri Suu Kyi, 16 taona, miaraka amin'ny zandry lahiny Mg Zin Ko Win. Nanapa-kevitra ny tsy hianatra intsony izy any Yangon satria sadaikatra ny hiray kilasy amin'ireo mpianatra kely noho izy ao amin'ny dingana faha-7. Sary sy fanazavàna nomen'i Hein Htet/The Irrawaddy.
Ma Thiri Suu Kyi, enina ambinifolo taona, manetsiketsika ny tànany amim-pahasorenana, tsy mitraka. Mipetraka eo anoloan'ny trano fanatobiana entana any Rangoon, izy ary nitantara ny fahazàrany niaraka tamin'ny namany tany amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana tany Thailandy.
“Tsy te-hiverina aty Burma aho,” hoy izy, sady nampiany fa tsy fantany izay ataony amin'ny fiainany ho avy.I
8 taona izy fony izy sy ny rainy nankany Thailandy tamin'ny 2008 ary zara raha mahatadidy hoe tahaka ny ahoana i Myanmar tamin'izany fotoana izany. Dingana faha 7 izy tany amin'ny toby Nu Po ary nihevitra fa afaka hanohy ny fianarany rehefa tafaverina any Myanmar. Saingy tsy izany intsony.
“Tsy ara-dalàna amin'ny olona mitovy taona amiko ny ho ao amin'ny dingana faha 7,” hoy izy. ” Tsy maintsy mianatra miaraka amin'ireo ankizy madinika aho, tsy te-ho any an-tsekoly aho aty,” hoy izy nanohy ny resaka, sady nanondro ilay zandrilahiny 10 taona.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/12/19/92731/